Avanafil (330784-47-9) ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းသည့်စက်ရုံ
Avanafil သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Avanafil သည် phosphodiesterase (PDE) inhibitors လို့ခေါ်တဲ့ဆေးအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တယ်။ လိင်မှုကိစ္စတွင်လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည် ဤသည်တိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှုတစ်ခုစိုက်ထူစေနိုင်သည်။ Avanafil သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပျောက်ကင်းစေသည့်အပြင်လိင်အလိုဆန္ဒကိုလည်းတိုးပွားစေသည်။ Avanafil သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများပြန့်ပွားခြင်းအားတားဆီးခြင်းမပြုပါ။ (HIV, အသည်းရောင်အသားဝါဘီ B, gonorrhea, ဆစ်ဖလစ်) ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ထိရောက်သောအတားအဆီးနည်းလမ်း (အမြဲတမ်းထိရောက်သောစုပ်ယူခြင်း) ကိုသုံးပါ။ အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း။ အသေးစိတ်အတွက်သင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အမည် Avanafil အမှုန့်
မော်လီကျူးအလေးချိန် 483.95g / mol
အရည်ပျော်မှတ် 150-152 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမျိုးသားသန်း ၃၀ ကျော်၌ erectile dysfunction (ED) ရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဒါက US မှာရောင်းတဲ့ ED ဆေးတွေဘာကြောင့်များရတာလဲဆိုတာပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးဝါးတစ်ခုမှာ avanafil ဖြစ်သည်။ Stendra ဖြစ်ပါတယ် avanafil အမှတ်တံဆိပ် သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေခြင်းငှါ
Avanafil (Stendra) PDE-5 ကိုပိတ်ဆို့သော PDE-5 (phosphodiesterase-type 5) inhibitor ဖြစ်သည်။
သင်ဤဆေးကိုသောက်သောအခါသင်၏လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုစိုက်ထူရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအချို့သောသွေးကြောများနှင့်ကြွက်သားများကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည် Erectile disfunction (ED) ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ Levitra® (vardenafil), Cialis® (tadalafil) နှင့်Viagra® (sildenafil) ကဲ့သို့ပင် avanafil သည်သင့်အားအချိန်အတန်ကြာစိုက်ထူရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
Avanafil (Stendra®) သည်အတော်အတန်အသစ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များတွင် Japan ရှိ Mitsubishi Tanabe Pharma မှတီထွင်ခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) ကဆေးဝါးများကို ED ကုသမှုအတွက်2000ပြီလတွင်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီ (EMA) က ၂၀၁၃ ဇွန်လတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
များစွာသောမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း avanafilLevitra, Cialis, Viagra နှင့်အခြား ED ဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးကြောင်းသတိပြုပါ။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု Avanafil ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲ
Avanafil ED သို့မဟုတ်ခွန်အားမရှိခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Avanafil သည် phosphodiesterase ကိုဟန့်တားသောဆေးအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သည်။
သတိပြုရမည်မှာသင်သည်စိုက်ထူရန်အတွက်သင်၏ penile သွေးကြောများသည်သွေးနှင့်ပြည့်နေကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤသွေးကြောများ၏အရွယ်အစားများပြားလာသောအခါသင်၏လိင်တံသို့သွေးများသယ်ဆောင်လာသောအခါဤအရာသည်ဖြစ်ပွားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏လိင်တံမှသွေးကိုထုတ်ယူသည့်သွေးကြောများ၏အရွယ်အစားမှာလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လိင်အင်္ဂါကြွက်သားများ၌သွေးဆက်လက်ရှိနေစေရန်သေချာစေသည်။
သင်သည်လိင်မှုကိစ္စနှိုးဆွသောအခါသင့်အားစိုက်ထူသင့်သည်။ ဒီစိုက်ထူမှုကသင့်ရဲ့လိင်တံကိုနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဓာတ်ပေါင်းဟာ guanylate cyclase (အင်ဇိုင်း) cGMP (cyclic guanosine monophosphate) ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းညှိပေးသည့်အရေးကြီးသောအတွင်းပိုင်းဆဲလ်များ။
တကယ်တော့ဒီစက်ဘီးနိုက်ကလိုရိုက်ဒီတာကသွေးကြောတွေသွေးကြောတွေကိုသွေးစီးဆင်းစေတဲ့သွေးကြောတွေရဲ့အပန်းဖြေမှုနဲ့ကျုံ့မှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်။ အခြားအင်ဇိုင်းတစ်မျိုးသည် cGMP ကိုဖျက်ဆီးသောအခါသွေးကြောများသည်၎င်းတို့၏မူလအရွယ်အစားကိုပြန်လည်ရရှိပြီးလိင်တံမှထွက်ခွာသွားစေပြီး၎င်းသည်စိုက်ထူခြင်း၏အဆုံးကိုမှတ်သားလိမ့်မည်။
Avanafil ကိုသင်ယူသောအခါ၊ PDE-5 သည် cGMP ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ cGMP သည်ကြာကြာနေပြီးသင့်စိုက်ထူမှုကိုတည်မြဲစေလိမ့်မည်။ cGMP ကြာကြာကြာသည်၊ သွေးသည်သင်၏လိင်တံတွင်ကြာကြာနေပြီးသင်၏စိုက်ထူမှုကြာရှည်လေလေဖြစ်သည်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကို Avanafil (Stendra) ထိရောက်စွာလုပ်သလား။
avanafil (Stendra) သည် ED ဆေးသစ်ဖြစ်သော်လည်းလေ့လာမှုများစွာက ED ကုသမှုတွင်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြသည်။ ဒီဆေးသည်ထိရောက်မှုရှိမရှိသိရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုငါးခုတွင်အမျိုးသား ၂,၂၀၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်။
လေ့လာမှုအပြီးတွင် avanafil သည် IIEF-EF ကိုတိုးတက်စေရန်အလွန်ထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ဒီဆေးကိုသောက်သုံးတဲ့အမျိုးသားအားလုံးဟာဆေးတွေကို ၅၀ ကနေ ၂၀၀ မီလီဂရမ်အထိသူတို့ရဲ့ IIEF-EF တိုးတက်မှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနရလဒ်များအရ avanafil သည် ၂၀၀ မီလီဂရမ်ပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏများတွင်ပိုမိုထိရောက်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် avanafil ကိုအခြား ED ဆေးများနှင့်မတူဘဲပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ avanafil သည်သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး ED ကုသမှုတွင်အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအမျိုးသားနှစ် ဦး သည် ၁၀၀ မှ ၂၀၀ မီလီဂရမ်အကြားသိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
avanafil ပါဝင်သောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် ED နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးအတွက်စာရင်းအင်းသိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိကြောင်းသုတေသီများကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုတွေမှာအသက် ၂၃ - ၈၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသား ၆၀၀ ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် avanafil သည် ED ကိုကုသရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။ လေ့လာမှုများစွာက၎င်းသည် ED အရွယ်ရှိသည့်အမျိုးသားများအတွက်တိုင်းတာ။ သိသာထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ Avanafil သို့မဟုတ် Tadalafil?
Avanafil သည်စျေးကွက်ထဲရှိနောက်ဆုံးပေါ် ED ဆေးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် ED ဆေးဟောင်းများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ Avanafil နှင့် Tadalafil နှစ်မျိုးလုံးအား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရန်အသုံးပြုသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုပုံစံနှင့်ကွဲပြားမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။
tadalafil (Cialis) သည်ကျယ်ပြန့်သောဆီးကြိတ်နှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလက္ခဏာများအတွက်ထိရောက်သောဆေးတစ်လက်ဖြစ်သော်လည်း Stendra သည်ပုံမှန်အားဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Tadalafil vs Avanafilဖြေ - ဘယ်အလုပ်ကပိုမြန်သလဲ
Tadalafil နှင့်အခြားပထမမျိုးဆက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများကိုခံစားရရန်မိနစ် ၃၀ မှ ၁ နာရီအကြားကြာပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ သင်သည်လေးလံသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုစားပြီးနောက်သင်စတင်လည်ပတ်ရန်တစ်နာရီကျော်ကြာနိုင်သည်။ ဤသည် avanafil နှင့်အတူမဟုတ်ပါဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်ထုတ်ကုန်၏ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ မီလီဂရမ်အကြားသောက်လျှင်သင်ခံစားရလိမ့်မည် avanafil အကျိုးသက်ရောက်မှု ၁၅ မိနစ်အတွင်း။ ဆိုလိုတာကသင်လိင်မစတင်ခင်မိနစ်အနည်းငယ်အလိုတွင်ယူနိုင်သည်။ သငျသညျအနိမ့်ဆေးထိုးသောက်လျှင်ပင်, 15mg ဆိုသညျကား, သင်မိနစ် 50 အတွင်းမှာစိုက်ထူရလိမ့်မယ်။
Avanafil vs Tadalafil: ဘယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းနည်းရှိသလဲ။
avanafil တွင်အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်း၊ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ tadalafil ကဲ့သို့မများပါ။ The avanafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး tadalafil နည်းတူလည်းမကောင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့် avanafil သည်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ tadalafil နှင့်အခြား ED ဆေးများနှင့်ဆက်နွှယ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှစ်ခု။
Avanafil ၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘဲပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများဖြင့်ထိုးနိုင်သည်။ တကယ်တော့ 200mg အထိမြင့်မားတဲ့ဆေးတွေကိုသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
Avanafil သည် tadalafil နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် PDE5, PDE11, PDE6 နှင့် PDE3 ကဲ့သို့သော phosphodiesterase-enzymes များကိုမတိုက်ခိုက်ဘဲ phosphodiesterase-type 1 အင်ဇိုင်းကိုပစ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Tadalafil နှင့်အခြားပထမမျိုးဆက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးများသည်အဆီဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသောအစားအစာများကိုအစာစားပြီးနောက်ထိရောက်မှုနည်းပါသည်။ သင်စားသောအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသင်စားသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အထိခိုက်မခံသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုသုံးရန်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, avanafil ကိုစားသောအစားအစာကြောင့်မထိခိုက်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်မည်သည့်အချိန်၌စားသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အစာကိုစားပါစေ avanafil အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီဆေးကိုမသုံးခင်စွမ်းအင်မြင့်မားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားတာကပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့လိင်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ရှိနိုင်တယ်။
Avanafil vs Tadalafil: မည်သူကိုအရက်ဖြင့်သုံးစွဲနိုင်သနည်း။
tadalafil ဆေးသောက်သောအခါအရက်ကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်ရှောင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ Tadalafil သည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချသောကြောင့်လူကိုအရက်နှင့်တွဲဖက်သောက်ခြင်းကသွေးပေါင်ချိန်ကိုမြင့်တက်စေသည်။
ဤမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအရက်ဖြင့်သောက်ခြင်းသည်နှလုံးခုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖလပ်ခြင်း၊ မောခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် Stendra သည်အရက်ကိုသောက်ပြီးနောက်၌ပင်သုံးစွဲရန်အလွန်လုံခြုံသည်။ Stendra မသောက်မီအရက်သောက်သုံးချောင်းအထိသောက်နိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အခြားဘေးအန္တရာယ်များမရှိနိုင်ပါ။
သို့သျောလညျးဤသငျသညျမူးရူးသွားနိုင်သည် Stendra ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုမဆိုလိုပါ။ အရက်သောက်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးပြitselfနာဖြစ်စေသောကြောင့်သင်သည်အရက်ကိုပုံမှန်သောက်သုံးရမည်။ အရက်သည်သက်သာစေသောဆေးဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကိုသင်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသောအခါ၎င်းသည်သင်၏လိင်ဆန္ဒကိုလျော့နည်းစေပြီးသင့်အားစိုက်ထူရန်ခက်ခဲစေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုတာကအရက်က ED ဆေးတွေရဖို့ဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကိုငြင်းပယ်တယ်။
မြင်နိုင်သည်အတိုင်း, avanafil အများအပြားအကျိုးကျေးဇူးများကျော်ရှိပါတယ် tadalafil။ ထို့ကြောင့်ဆရာဝန်များသည်ယင်းတို့၏လူနာများအားဆေးညွှန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဘာလုပ်မလဲ Avanafil ကိုထိခိုက်ပါ?
အချို့သောဆေးဝါးများကိုပေါင်းစပ်။ မသုံးနိုင်သော်လည်းအချို့ကိုထိရောက်မှုရှိစေရန်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်၍ မရနိုင်သောဆေးများမှာအချင်းချင်းနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသောဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်မည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုမသုံးစွဲမီအခြားမူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုသင်သုံးစွဲနေသည်ကိုသင့်အားအသိပေးပါ။ သငျသညျမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်သောက်သုံးသောပြောင်းလဲချင်လျှင်ဤသည်ကိုလည်းဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူမပါ ၀ င်ဘဲမိမိဘာသာဘာမှမလုပ်ပါနှင့်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ avitrafil ကို Levitra, Staxyn (vardenafil), tadalafil (Cialis) သို့မဟုတ် Viagra (sildenafil) ကဲ့သို့သောဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန်သင့်အားပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေးပါသည်။ ဒီဆေးတွေကို ED နဲ့ arterial hypertension (pulmonary) တို့ကုသရာမှာလည်းသုံးတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကို avanafil နှင့်အတူအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလွန်အကျွံထိခိုက်စေပြီးပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
Avanafil ကိုမသုံးမီ၊ အခြားဆေးဝါးများသောက်နေသလားကိုကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားအသိပေးပါ။
ထိုကဲ့သို့သော telithromycin, erythromycin, clarithromycin နှင့်အခြားပantibိဇီဝဆေးများ
အားလုံးသောဆေးများဖြစ်သော ketoconazole, itraconazole နှင့်အခြားဆေးများ
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါသို့မဟုတ်မြင့်မားသောသွေးဖိအားကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောမည်သည့်ဆေးဝါးမဆို၊ tamsulosin, terazosin, silodosin, prazosin, doxazosin, alfuzosin နှင့်အခြားသူများ။
Telaprevir နှင့် Boceprevir ကဲ့သို့သောအသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးဘီ) ဆေးများ။
ထိုကဲ့သို့သော saquinavir, ritonavir, indinavir, atazanavir ကဲ့သို့သော HIV / AIDS ဆေးများ။
အထက်ပါစာရင်းများသည်ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါ။ Doxazosin နှင့် Tamsulosin ကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများသည် avanafil နှင့်အတူတွဲသုံးလျှင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်များစွာသောအခြားဆေးဆိုင်နှင့်ဆေးညွှန်းမရသည့်ဆေးများသည် avanafil နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီတာမင်ပါဝင်သည်။ အောက်ခြေလိုင်းသည်သင်၏ဆရာဝန်မသိဘဲ avanafil နှင့်မည်သည့်ဆေးကိုမျှမသုံးပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးများသာမကသင်သတိထားသင့်သည့်ဆေးဝါးများသာမကသင့်တွင်အခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့ရှိပါကလည်းသတိထားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် avanafil ကိုမသုံးမီသင့်တွင်အောက်ပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြanyနာတစ်ခုခုရှိသလားကိုသင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်တံ - သင်၌ကွေးသောလိင်တံရှိပါကသို့မဟုတ်သင်၏လိင်တံတွင်မွေးရာပါမသန်မစွမ်းမှုများရှိပါက avanafil ကိုအသုံးပြုပါကသင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၅၀ နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက
အကယ်၍ သင်သည်လူစည်ကားသော disc၊ coronary artery disease သို့မဟုတ်သင်၏မျက်လုံးများသည် cup-to-disc အချိုးနိမ့်ကျနေလျှင်၊ သင်သည်နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရလျှင်၊ သွေးထဲ၌အဆီဓာတ်မြင့်မားမှု (Hyperlipidemia) သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသွေး ဖိအား (သွေးတိုးရောဂါ) ။
သင့်ဆရာ ၀ န်ကိုသတိပြုစေလိုသည့်အခြားအခြေအနေများတွင် -
ထိုကဲ့သို့သော idiopathic subaortic stenosis သို့မဟုတ် aortic stenosis အဖြစ်သွေးကြောနှင့်အတူပြနာများ
ရောဂါကို Retinitis pigmentosa
အခြားသူများအကြားတံစဉ် - ဆဲလ်သွေးအားနည်းရောဂါ
Stendra ပါ ၀ င်သည့် PDE5 inhibitors သည်အချို့သော CYP3A4 inhibitors နှင့် alpha-blockers တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်ဤဆေးများကိုအသုံးပြုနေပါကသင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးရန်အရေးကြီးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် avanafil သည် ED ကုသမှုအတွက်ထိရောက်သောနှင့်လုံခြုံသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Avanafil သည် Erectile Dysfunction ကိုအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အချို့သော avanafil အကျိုးကျေးဇူးများတွင်၎င်းသည် ED ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသောအခြားဆေးများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လိင်မဆက်ဆံမီ ၁၅ မိနစ်ခန့်သင်သောက်နိုင်သည်။ ထိရောက်မှုရှိနိုင် ဦး မည်။
Avanafil ၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာသင်ထိရောက်ရန်နေ့စဉ်၎င်းကိုယူရန်မလိုပါ။ ၎င်းကိုသင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Avanafil ကိုခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းစွာသည်းခံနိုင်ပြီးအစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ Avanafil သည်အခြား ED ဆေးများကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာမရှိသဖြင့်အရက်သောက်ပြီးနောက်သင်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ED ကိုကုသမှုကတစ်မျိုးတည်းပဲ avanafil အသုံးပြုသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကို Raynaud ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုကုသရာမှာအသုံးပြုပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအချို့သည်အအေးမိခြင်း၊ Raynaud ၏ဖြစ်စဉ်သည်နှာခေါင်း၊ ဒူး၊ နို့သီးခတ်၊ ခြေချောင်းနှင့်နားများစသည့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများသို့သွေးစီးဆင်းမှုလျော့ကျသောအခါဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤအခြေအနေသည်အရေပြားအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Avanafil ကသင့်အားစိုက်ထူရန်ကူညီလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင့်ကိုကြိုတင်ပြီးထုတ်ပစ်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါကြောင့်သင်မလိင်ဆက်ဆံခင်၊ သင့်ဆေးဖက်ဝင်ကိုဆေးမသောက်ဘဲသင်ပြုခဲ့သည့်နည်းတူရှေ့ပြေးပုံစံဖြင့်ဆက်ဆံပါ။ avanafil သည်လိင်မှုနှိုးဆွသောအခါမင်းကိုစိုက်ထူရန်သာကူညီလိမ့်မည်ဟုသတိရပါ။
Avanafil မသုံးမီအရက်များစွာမသောက်ပါနှင့်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းက avanafil အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ မခံစားနိုင်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။ အရက်နှင့် avanafil ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးသင့်လိင်စိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျဆင်းစေနိုင်သည်။
သင် avanafil သောက်ရန်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စီစဉ်ထားသော ၂၄ နာရီအတွင်းစပျစ်သီးဖျော်ရည်ကိုမသောက်ပါနှင့်။ စပျစ်သီးဖျော်ရည်တွင်သင်၏သွေးကြောထဲ၌ avanafil ပမာဏတိုးပွားစေမည့်ဓာတုပစ္စည်းအချို့ပါ ၀ င်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုခံစားရရန်အခွင့်အလမ်းများတိုးပွားစေသည်။
သင်၏ခန့်မှန်းမှုကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဂုဏ်ပြုပါ။ Avanafil ကိုယူပြီး၊ foreplay တွင်ပါ ၀ င်ပြီးသော်လည်း၊ သင်သည်စိုက်ထူမှုကိုမရရှိပါက၊ သို့မဟုတ်သင်စိုက်ထူခြင်းခံရလျှင်၊ ၎င်းသည်လိင်ဆက်ဆံရန်နှင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်ကြာမြင့်စွာမကြာပါကသင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ avanafil သည်သင့်အတွက်အလွန်အမင်းစွမ်းအားကြီးပုံရသည်ဆိုလျှင်ထပ်တူသက်ဆိုင်ပါသည်။ သင်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်သင်၏စိုက်ထူမှုပျောက်ကွယ်သွားပုံမပေါ်သည့်အခါ။ သင်၏ဆရာ ၀ န်ကို၎င်းအကြောင်းသင့်အားအသိပေးပါ။ ဒါ့အပြင် avanafil ကိုသင့်ဆရာဝန်သတ်မှတ်ထားတာထက်မယူဖို့သတိရပါ။
Avanafil (Stendra) ကိုအသုံးပြုခြင်း
avanafil ထိရောက်မှုရှိရန်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသောက်ပါက၎င်းကိုကူညီလိမ့်မည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မည်မျှသောက်ရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဆရာဝန်ကသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
အခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများကဲ့သို့ပင် avanafil သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ဆေးဝါးသည်အမှုန့်သို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်သည်။ avanafil သည်မြန်ဆန်သောကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ ၁၅ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်အကြာတွင်သောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ဆရာ ၀ န်ကသင့်အား avanafil နည်းနည်းသောက်ရန်သတ်မှတ်ထားပါကတစ်နေ့လျှင် ၅၀ မီလီဂရမ်ဆိုပါကသင်မလိင်ဆက်ဆံမီမိနစ် ၃၀ မတိုင်မှီသင်ဆေးသောက်ရန်အကြံပြုသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဆေးဝါးများကိုအပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာသင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သည့်အခါ avanafil အမှုန့်ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ဤဆေးကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာသောက်ရန်အကြံပြုပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကဆေးဝါးအပေါ်မည်သို့တုံ့ပြန်ပုံကိုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး avanafil သက်သာခွင့်များကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အတွက်ဆေးပမာဏကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
ဆေးညွှန်းအရဆေးပညာဖြစ်သောကြောင့်သင့်အားဆရာဝန်နှင့်ပြသရန်အရင်ဆရာဝန်နှင့်ပြသရန်လိုသည် ဝယ် avanafil။ ဆရာဝန်ကသင့်အားမေးခွန်းများစွာမေးလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်၏အထွေထွေပေါ် မူတည်၍ avanafil သောက်သုံးသောပမာဏသည်သင့်အတွက်မည်သည့်အရာနှင့်သင့်လျော်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထောက်အကူအချို့စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျန်းမာခြင်း၊ အသက်၊ နှင့်သင်သုံးကောင်းသုံးနိုင်သောအခြားဆေးဝါးများ။ ထုတ်ကုန်တံဆိပ်ပါအချက်အလက်သို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း avanafil ကိုအသုံးပြုပါ။ avanafil သည် ED နှင့် Raynaud ၏ဖြစ်စဉ် မှလွဲ၍ အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုမကုသကြောင်းသတိရပါ။
Avanafil ကိုအားသာချက်သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည် - ၅၀၊ ၁၀၀ နှင့် ၂၀၀ မီလီဂရမ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အား ၁၀၀ မီဂရမ်အင်အားဖြင့်စတင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏တုံ့ပြန်ပုံပေါ် မူတည်၍ သောက်သုံးသောပမာဏကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင် avanafil အမှုန့် ၀ ယ်သည့်အခါတိုင်းသင့်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောသင့်တော်သောအင်အားကိုသေချာစေရန်တံဆိပ်ကပ်ပါ။
ED ၏အကဲဖြတ်မှုတွင်အခြေခံအကြောင်းရင်းများရှိမရှိကိုရှာဖွေရန်နှင့်အခြားကုသမှုနည်းလမ်းများဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ပြည့်စုံသောဆေးစစ်ချက်တစ်ခုပါ ၀ င်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများသည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုနှေးကွေးစေပြီး၊ ဤအခြေအနေများကိုကုသသည့်အခါ၊ လိင်ဆိုင်ရာ drive ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။ ယေဘူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများတွင် -
ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ - ဤသည်မှာသွေးတိုး၊ အင်ဆူလင်အဆင့်များ၊ ကိုလက်စထရောနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီများတိုးလာသည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။
Peyronie ၏ရောဂါ - လိင်တံတွင်အမာရွတ်တစ်သျှူးများဖြစ်ပေါ်လျှင်
ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်း (သို့) ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကုသခြင်း
အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း
ဦး နှောက်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရာများစွာသည် ဦး နှောက်မှစတင်သည်။ ED ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများတွင် -
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း
သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် impregnating နိုင်ခြင်း
သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် avanafil အားသင့်အားမညွှန်ကြားမီ၊ သူသည်အထက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များသာမကအောက်ပါတို့ကိုပါကြည့်ရှုလိမ့်မည်။
သင့်တွင်ရှိပြီးသားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါရှိပါကသင်လိင်ဆက်ဆံသောအခါနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအခြေအနေရှိသူများအတွက် avanafil ကို အသုံးပြု၍ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသမှုကိုမပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဘက်အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေသောသို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းနေသောလူနာများသည် Stendra နှင့်အခြားသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုများကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
PDE5 အသုံးပြုသူအချို့သည် ၄ ​​နာရီကျော်ကြာသောစိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အချို့က ၆ နာရီကျော်ကြာသောနာကျင်သည့်စိုက်ထုတ်မှုများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်သင်ကြုံတွေ့ရပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နှောင့်နှေးနေလျှင်သင်၏ penile တစ်သျှူးပျက်စီးနိုင်ပြီးသင်၏စွမ်းရည်ကိုထာဝရဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
penile ခန္ဓာဗေဒပုံပျက်သော (Peyronie ၏ရောဂါ၊ angulation သို့မဟုတ် angulation) ရှိသောလူနာများသည် avanafil ကို သုံး၍ သတိကြီးစွာထားသင့်သည်။ အလားတူစွာပင် priapism ဖြစ်စေနိုင်သောအခြေအနေများရှိသောလူနာများသည် avanafil ကိုသုံးသောအခါသတိထားသင့်သည်။
Stendra သို့မဟုတ်အခြား PDE5 inhibitors များကိုအသုံးပြုသောကြောင့်သင်အမြင်အာရုံပျောက်ဆုံးပါကသင့်လျော်သောဆေးကုသမှုခံယူမှုကိုသင့်ဆရာဝန်အားအမြန်ဆုံးအသိပေးသင့်သည်။
အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်းသည် NAION ၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် PDE5 inhibitors ကိုအသုံးပြုသောလူအချို့တွင်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ များစွာသောမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း avanafilဤအရာသည်ခဏခဏဖြစ်လေ့မရှိသော်လည်းသင်သတိပြုသင့်သည်။
ဤသည် PDE5 inhibitors နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားရှားပါးအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် avanafil ကိုအသုံးပြုနေသည်နှင့်သင်ရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ကြားနာမှုလျော့နည်းခြင်းများကြုံတွေ့ရပါကသင့်ဆရာဝန်ကိုအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါ။ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုမကြာခဏမူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်လည်ချောင်းနာခြင်းဖြင့်တွဲဖက်လေ့ရှိသော်လည်းဤလက္ခဏာများသည် PDE5 inhibitors မှဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာမထင်ရှားပါ။
ဤရောဂါလက္ခဏာများ၏အကြောင်းရင်းကိုဆရာဝန်များကဆုံးဖြတ်ရန်မှာဆရာဝန်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုရောဂါများကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရပါကသင်ဆရာ ၀ န်မှသင့်လျော်သောရောဂါလက္ခဏာမပြမချင်း avanafil ဆေးကိုမသောက်လျှင်၎င်းသည်ကူညီလိမ့်မည်။
Stendra တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် လုံခွုံသောအလွန်နည်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသာရှိသောထိရောက်သောဆေးဝါးများ၊ ဥပမာ Stendra ၏အများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းသည်ဆေးဝါးသုံးစွဲသောအမျိုးသား ၅ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအားသာထိခိုက်သည်။
avanafil ၏နောက်ထပ်ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာဖလပ်မှုဖြစ်သည်။ avanafil သုံးသပ်ချက်များအရ၊ ဤအခြေအနေသည်သုံးစွဲသူ ၃ မှ ၄% ကြားတွင်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ Avanafil ရဲ့သွေးစီးဆင်းမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဖလပ်စ်ကအချို့သောနာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာအများအားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ အခြား avanafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အအေးမိရောဂါ (nasopharyngitis) နှင့်နောက်ကျောနာကျင်မှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤ Avanafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးသည်သုံးစွဲသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ဖြင့်ဖြစ်ပွားသည်။
သင် ... လုပ်ချင်ပါသလား avanafil ဝယ်ပါ? သို့ဆိုလျှင်သင်ဝယ်ယူထားသော avanafil အမှုန့်များသည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်ကြောင်းသင့်အားအာမခံပေးနိုင်သောယုံကြည်ရသော avanafil ပေးသွင်းသူကိုရွေးချယ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကျော်ကြားသော avanafil ထုတ်လုပ်သူ CMOAPI မှတိုက်ရိုက်ရယူသည်။
CMOAPI သည် avanafil သာမကအခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်စေသောဆေးများကိုပါထုတ်လုပ်သည်။ Avanafil ကုန်ကျစရိတ်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ avanafil ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့နိုင်ရန်သင်နှင့်သင်ပူးပေါင်းလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ avanafil ကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
(FDA က Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် Stendra ကိုအတည်ပြုသည်) (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်) အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ။ ၂၀၁၂ ပြီ ၂၇ ရက်။
"Spedra (avanafil)" ။ ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီ။ 17 April 2014 ရယူရန်။
US 6797709, Yamada K, Matsuki K, Omori K Kikkawa K၊ “ မွှေးကြိုင်သောနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်သည့် ၆ ခုပါသိမ်ဒြပ်ပေါင်းများ” သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် Tanabe Seiyaku Co. တွင်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
“ VIVUS သည် Avanafil နှင့် Menarini နှင့်မိတ်ဖက်ပြုခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်” Vivus Inc ကို 2015-12-08 အပေါ်မူရင်းကနေမော်ကွန်းတင်။
“ VIVUS နှင့် Metuchen ဆေးဝါးများသည် STENDRA သို့ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အရေးအတွက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်” Vivus Inc ကို3အောက်တိုဘာလ 2016 ။